Nanampy Tamin’ny Fanaovana Fefiloha Izy Ireo
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Basque Bichlamar Bicol Catalan Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Galicienne Goun Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kabyle Kannada Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Krio Kroaty Litoanianina Malagasy Malayalam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mingrelian Mixe Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Oromo Ourdou Ouzbek Papiamento (Aruba) Pendjabi Persianina Poloney Portogey Portogey (Portogaly) Rarotonga Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tahisianina Tajiki Tarasque Tigrigna Tiorka Tlapanèque Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Télougou Umbundu Valencienne Xhosa Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal Éwé
Nisy oram-be nivatravatra tany Eoropa afovoany, tamin’ny Jona 2013, ka be dia be ny renirano tondraka. Niakatra be ny Reniranon’i Danube any Hongria, ary mbola tsy nisy hoatr’izany mihitsy hatramin’izay.
Nanontany ny biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Hongria àry ny fanjakana sao mba afaka manampy amin’ny fiarovana an’ilay renirano tsy ho tondraka izy ireo. Nanaiky ny biraon’ny sampana, ka nanasa ny fiangonan’ny Vavolombelon’i Jehovah manamorona ny Reniranon’i Danube mba handray anjara amin’ilay asa nalamin’ny manam-pahefana.
Mahavariana fa be dia be no tonga tamin’ilay izy. Tao anatin’ny andro vitsivitsy, dia Vavolombelon’i Jehovah 900 mahery avy amin’ny fiangonana 72 no nanamafy an’ilay fefiloha tsy ho vaky. Nasaina nanao karatra famantarana izy ireo. Nisy soratra hoe “Vavolombelon’i Jehovah” ilay izy, ary natao teo koa ny anarana sy ny tanàna niavian’ilay olona.
Nanoratra ho an’ny fiangonan’ny Vavolombelon’i Jehovah ny solontenan’ny Vokovoko Mena tao amin’ny tanàna iray. Hoy izy: “Misaotra betsaka anareo izahay satria vitsy ny olona toa anareo. Miray hina ianareo sady vonon-kanampy. Misy aminareo aza nanao dia lavitra mihitsy. Faly erỳ aho rehefa mitantara ny zavatra tsara nataonareo teto amin’ny tanànantsika.”
Tompon’andraikitra ao amin’ny fikambanana mpanampy tra-boina ny lehilahy iray sady anisan’ny solombavambahoaka any Hongria. Nankasitraka ny fanampian’ny Vavolombelon’i Jehovah izy, ka nandefa taratasy fisaorana tany amin’ny biraon’ny sampana.